Paartiin naannoo Oromiyaa bulchuufi paartiin Obbo Leencoo Lataa tokkooman - BBC News Afaan Oromoo
Paartiin naannoo Oromiyaa bulchuufi paartiin Obbo Leencoo Lataa tokkooman
Dhaabni naannoo Oromiyaa bulchaa jiru Oromoo Dimookiraatik Paartii (ODP) fi dhaabni mormituu dhihoo alaa biyyatti gale, Adda Dimookiraatawaa Oromoo (ADP) tokkooman.
Dhaabbileen siyaasaa lamaan walitti makamuuf yaada waliigaltee (memorandum of understanding) mallatteessaniiru.
Dura taa'aan Itti-aanaa ODP Obbo Lammaa Magarsaa walitti makamuun isaanii qabsoo siyaasaa biyyattiif fakkeenyummaa fi ergaa guddaa kan qabu dha jedhaniiru.
''Sammuu tokko fi laphee tokkoon hojjechuuf waliigalleerra. ODP dhaaba dargaggootaan guutame waan ta'eef ODF walin yeroo makamnu jaarmiyaa cimaa taana.''
Hooggantoonni ODF biyya osoo hin seenin ''biyya alaa ta'aniis baay'ee nu deeggaraa turan'' kan jedhan Obbo Lammaan isaan waliin hojjechuuf carraa argachuu keenyatti gammachuu guddaatu nutti dhagahama jedhaniiru.
Dura taa'aan Adda Dimookiraatawaa Oromoo (ADO) Obbo Leencoo Lataa gama isaaniitiin ''Adda facca'uun karaa gadadoo fi hiiyyummaatti nu geessuu dha,'' jedhan.
''Har'a tokkummaa dhaabolii siyaasaa qofa osoo hin taanee tokkummaa uummata Oromootu barbaachisa. Dhaaboliin Oromoo akka bara darbee osoo hin taanee akka har'aatti yaa yaadnu, hiriira tokko keessatti walin yaa hiriirru.''
Obbo Lammaan ''Gara fulduraattis paartiileen ilaalcha fi tarsiimoo nuyin wal fakkaatu fi nutti dhiyaatu qaban yoo dhufan gammachuun simanna'' jechuun dubbataniiru.
Hogganaan Gurmaa'insa siyaasa baadiyyaa ODP Obbo Addisuu Araggaa ibsa har'a kennaniin paartiilee lamaan gidduu tarsiimoo fi dambii bu'uuraa irratti garaagarummaan dhibuu akkasumas gaaffiin ummata biraa dhiyaachaa ture adeemsa walitti makamuu paartiilee lamaanif sababadha jedhaniiru.
'Yeroo filannoorra kan nuti barbaannu waliigalteedha'
Adeemsa walitti makamuu kana keessatti paartiileen lamaan marii bal'aa taasisaniiru jedhameera.
Gara fuulduraattis koreen hundaa'ee dhimma maqaa, alaabaa fi dhimmoota biroo irratti ni hojjeta jedhaniiru. Yeroo ammaa paartiileen Oromoo 17 ta'an ni jiru.
Dhaabni Obbo Leencoo Lataa waggaa muraasa dura kan hundaa'e yoo ta'u waamicha Ministirri Muummee paartilee siyaasaa ala jiranif taasisanin dhaabbilee dursanii gara biyyatti deebi'an keessaa tokkodha.
Ministirri Muummee fi hoggantoonni dhaabbilee mormituu tokko tokko dhaabbileen mormituu baay'atan osoo xiqqaatani jechuun irra deddeebbiin dubbachuun isaanii ni yaadatama.